पृथ्वीनारायणबारे उठेका ३ थरी विचार : सत्यको पथमा नगन्य मत – Janasamsad
सोमबार, पौष २७, २०७७ ११५३३४
काठमाडौं । हरेक वर्ष पुस महिनाको अन्तिम साता नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थायी बहसले ठाउँ पाउँछ, त्यो हो पृथ्वीजयन्तीमा बिदा दिने कि नदिने ? यस्तो बहस पछिल्लो एक दशकदेखि निरन्तरजसो चलिरहेको छ तर यो बहस कहिलै टुंगोमा पुर्‍याउने कोसिस पनि गरिँदैन । यसलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू ‘अभावको राजनीतिक एजेण्डा’ रहेकोले सरोकारवाला भनिएको पक्षले नै यसलाई पूणर्ता दिन चाहँदैन ।
राजनीतिक रूपमा एजेण्डा सकिएपछि पहिलो संविधान सभा चुनावमा चारसिट मात्रै ल्याएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वीनारायण शाह आफ्नो राजनीतिक मुद्दाको रुपमा बोक्न थाल्यो । त्योभन्दा पहिले पनि केही समूहले पृथ्वीनारायणलाई आफ्नो आदर्श नमानेका होइनन् । पृथ्वी विचार अभियान्ता भरत बस्नेत आफूले २०५७ सालदेखि नै पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो आदर्श मान्दै आएको बताउँछन् ।
पृथ्वीनारायण शाह २०६२र६३ सालसम्म सामान्यबाहेक खासै बहसको विषय थिएनन् । पर्यटन व्यवसायी भरत बस्नेतले डिल्लीबजारस्थित भोजनगृहमा २०५७ सालमा पूणर्कदको पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखेर त्यहीँ अभियान चलाउन थालेपछि पृथ्वीनारायण शाहको बारेमा बहस चल्न सुरु भयो । बस्नेत आफूले उनको दिव्योपदेशबाट प्रभावित भएर त्यस्तो कार्यक्रम गर्ने र उनको दिव्योपदेश प्रिन्ट गरेर बेच्ने गरेँ । तर त्यतिबेलासम्म पृथ्वीनारायण शाहलाई कसैले पनि सम्झिने गरेका थिएनन् ।’ बस्नेत भन्छन् ‘सकारात्मक होस् या नकारात्मक पृथ्वीनारायण शाहको चर्चा कहिलै टुट्दैन त्यो नै खुसीको कुरा हो ।
एकाथरीले दिव्योपदेश पृथ्वी नारायण शाहले लेखेकै होइनन् भन्ने तर्क गर्छन्, अर्कोथरीले दिव्योपदेश नै अकाट्य सत्य हो भन्ने भ्रम पाल्छन् ।
यही क्रममा जनताले चाहे अनुसार पृथ्वीनारायणको समर्थन र विरोध गर्ने स्वरहरु स्वार्थपूर्तिका लागि उठ्न थालेको उनी बताउँछन् । नयाँ स्वतन्त्र अभियान्ताको रुपमा उदाएका रमेश खरेल, मनीषा कोइराला जस्ता व्यक्तिहरुको अहिलेको स्वार्थ केही नदेखिए पनि पछिको स्वार्थ के हो ? भन्नेबारेमा सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । अनलाइन खबरबाट